Anyị edepụtara aha maka ụlọ ọrụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ Taizhou na 2021!
N'oge na-adịbeghị anya, Tiantai Dingtian Packaging Co., Ltd. edepụtara aha ya dị ka ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-akwụ ụgwọ dị ukwuu na Taizhou City maka 2021. Ngwa ngwaahịa akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere uru nke ịhazi ya na imegharị ya. Ihe a na -emebi emebi na gburugburu ebe obibi.
Banyere uru ngwaahịa nke trays akwụkwọ na -anaghị emetụta gburugburu ebe obibi
Anyị maara na n'afọ ndị na -adịbeghị anya, obodo etinyela isi mmepe na -adigide n'ogo nke ike siri ike nke ike dị ọcha. N'ọnọdụ a, mpụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na -anaghị emetụta gburugburu ebe obibi na -emetụta ihu igwe na gburugburu ụwa. Ojiji nke mmeghari gburugburu ebe obibi ...
Development akụkọ ihe mere eme nke pulp ịkpụzi ụlọ ọrụ na China
site na nchịkwa na 21-08-25
Industrylọ ọrụ na -akpụzi pulp etolitela ihe karịrị afọ 80 na mba ụfọdụ mepere emepe. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ na -akpụzi pulp nwere nnukwu ihe na Canada, United States, Britain, France, Denmark, Netherlands, Japan, Iceland, Singapore na obodo ndị ọzọ. N'ime ha, Brita ...
Kedu ihe kpatara eji ahọrọ tray paper?
Atụmanya mmepe nke ụlọ ọrụ akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ sara mbara, a na -ejikwa trays akwụkwọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. A chịkọtara ihe kpatara ya dị ka ndị a: (1) Mmepe akụ na ụba ngwa ngwa na -enye ohere mmepe maka ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa tray akwụkwọ. (2) nkwalite na -aga n'ihu nke p ...
Gịnị bụ tray pulp?
Pulp tray bụ ngwugwu dị irè nke pulp mepụtara. A na -emepụta ngwaahịa pulp kpụrụ akpụ site na ibelata akwụkwọ mkpofu n'ime pulp. Usoro a gụnyere ịgbakwunye ihe nkwalite arụmọrụ dị iche iche. Mgbe ahụ, a na -emikpu ebu ahụ na pulp wee wepụta mmiri site na pulp site na oghere siri ike. ...
Njirimara nke nkwakọ ngwaahịa pulp
site na nchịkwa na 20-10-27
Nkwakọ ngwaahịa na -agafe n'usoro sistemụ ọkọnọ dum site na akụrụngwa, ị nweta ihe, imepụta, ire ere na ojiji, yana metụtara ndụ mmadụ. Site na mmejuputa atumatu nchedo gburugburu ebe obibi yana nkwalite ebumnuche ebumnuche nchekwa gburugburu ebe obibi, ntuli aka ...
Igbe ịchọ mma Mf, Pulp Cup njide, Dyeing Kechie Pulp njide, Ejiri Pulp Tray na -acha, Igbe nkwakọ nri, Nkwakọ ngwaahịa nri katọn,